कस्तो हुनुपर्छ क्वारेन्टाइन ? : RajdhaniDaily.com
Homeभर्खरैकस्तो हुनुपर्छ क्वारेन्टाइन ?
पछिल्लो तथ्याकं हेर्ने हो भने देशभर ११ हजार २ सय ७५ जना क्वारेन्टाइन बसेका छन् । अहिले भएका अधिकांश क्वारेन्टाइनले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । पाँच वर्ष नपुगेका बालबालिका, दीर्घरोगी (औषधि नियमित खाइरहेका) र ६५ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन व्यवस्था हुनुपर्छ । हुलमुलमा एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन । क्वारेन्टाइन समुदायबाट अलिक टाढा रहनुपर्छ ।
विदेशबाट आएकालाई पीसीआर परीक्षण नै नगरी धमाधम क्वारेन्टाइनमा राखेको पाइएको छ । यसो गर्दा जोखिम झनै बढ्छ । कुनै पनि शंकास्पदलाई संक्रमण फैलिनसक्ने समयसम्म निगरानीमा राखिनुलाई क्वारेन्टाइन भनिन्छ ।
अधिकांश क्वारेन्टाइनले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । पाँच वर्ष नपुगेका बालबालिका, दीर्घरोगी (औषधि नियमित खाइरहेका) र ६५ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन व्यवस्था हुनुपर्छ । हुलमुलमा एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन । क्वारेन्टाइन समुदायबाट अलिक टाढा रहनुपर्छ ।
कोरोना हकमा १४ देखि १७ दिनसम्म शंकास्पद व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ । सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ ।
रोगस“ग लड्न प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सन्तुलित भोजन व्यवस्था हुनुपर्छ । सुत्न छुट्टै बेड व्यवस्थापन हुनुपर्छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि चिकित्सक, जनस्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालाकर्मी, नर्स र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टिम हुनुपर्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दिर्घरोगीलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने ? भन्नेबारे वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन सातासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ ।
केही साताअघि प्रदेश २ पर्सासहितका केही जिल्लामा हामी पुगेका थियौं । मुख्य समस्या जनघनत्व बढी भएको स्थानमा भौतिक दूरी कायम नभएको र मास्क प्रयोग नगरेको पाइयो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइन पूर्ण मापदण्डयुक्त छैनन् । कोभिड–१९ तीव्र रूपमा फैलिइरहेको छ । खुला सीमाका कारण भारतमा फैलिएको संक्रमण नियाल्दै नाकामा व्यवस्थित गर्नुपथ्र्यो ।
भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्दै पीसीआर परीक्षण गरेको भए प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । र, परीक्षणक्रममा पोजेटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा राख्नुपथ्र्यो ।
सम्भव भएसम्म शौचालयसहितको कोठा र सो नभए न्यूनत्तम प्रतिकोठा अधिकत्तम तीन जनाको दरले ६ जनाका लागि साझा शौचालय र स्नान गृह भएको हुनुपर्छ ।
क्वारेन्टाइनस्थलमा स्वास्थ्य सामग्रीसहितको प्रतिसय जनाका लागि मेडिकल अधिकृत एकजना, स्वास्थ्य परिचारिका एक, पारामेडिक एक, ल्याब टेक्निसियन (आवश्यकताअनुसार) हुनुपर्छ । जसमा २४सैं घण्टा एम्बुलेन्स व्यवस्था गनुपर्ने मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
वली स्वास्थ्य सेवा विभागका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हुन् ।
कोर्स बाहिरको किताब पढ्दा खिसी गर्ने पनि छन्
प्रशान्त वली - July 24, 2021